ဖိုင်ကို DAEMONS TOOLS များပုံရိပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်အဘယ်သူမျှမ - DAEMONS TOOLS များ - 2019
Samsung ကစမတ်ဖုန်းအများစုထုတ်လုပ်သူအသုံးပြုသောအရည်အသွေးမြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားဝန်ဆောင်မှုဘဝဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင်, devices တွေကိုနည်းပညာပိုင်းအသံသည်များမှာတောင်မှစစ်ဆင်ရေး၏နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အချို့သောတိုင်ကြားစာသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်၏တစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အတော်များများကကိစ္စများ device ကိုမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နေဖြင့်အန်းဒရွိုက်နှင့်အတူဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ချိန်ကလူကြိုက်များမော်ဒယ် Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ၏ခြယ်လှယ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေစဉ်းစားပါ။
မော်ဒယ်များ၏နည်းပညာပိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများ၎င်း၏အသျှင်အသက်အရွယ်ယန္တရားရှိနေသော်လည်း devaysu ယနေ့ယင်း၏ပိုင်ရှင်ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက် entry ကိုအဆင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်။ သင့်လျော်သောအဆင့်မှာ Android ကို performance ကိုထောကျပံ့ဖို့လောက်။ ယင်းစနစ်၏ဗားရှင်းကို update ပြုလုပ် reinstall နှင့်အတော်ကြာ software ကို tool များ၏ပြိုကျ၏အမှု၌စမတ်ဖုန်း OS ကိုစတင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ restore ဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။
သာအပြည့်အဝနဲ့စနစ်တကျကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မတိုင်မီထွက်သယ်ဆောင်လုံခြုံရေးသေချာစေရန်နှင့်မှားယွင်းတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကနေ Device ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ, Samsung က GT-I8552 အတွက်စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲတပ်ဆင်မှုအတွက် user data ကိုခွင့်ပြုပါ။ ဒါဟာကိရိယာ၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုတစျပိုငျးကိုအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမှအောက်ပါအကြံပြုချက်များများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလျစ်လျူရှုရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်!
သင်သိသည့်အတိုင်း Windows-အစီအစဉ်ကိုကနေတဆင့်မည်သည့်စက်ကိရိယာနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မည်အကြောင်း, operating system ကိုယာဉ်မောင်းနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမှတ်ဉာဏ် devices များအပိုင်း manipulate ဖို့အသုံးပြု utilities ၏လျှောက်လွှာ၏ရှုထောင့်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းများဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် Firmware များအတွက်ယာဉ်မောင်း Installing
မော်ဒယ် GT-i8552 က Galaxy ဝင်းဆိုပြီးသည်ထို့နောက်ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူပြဿနာများမဖြစ်သင့် - ကို Samsung Kies - ထုတ်လုပ်သူက Android အခြေပြုစက်ကိရိယာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲတွေနဲ့ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်အပေါငျးတို့သလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများ, ကယ်တင်တတ်၏။
တနည်းအားဖြင့် Kiyoshi setting, အသုံးပြုသူ device ကိုအားလုံးကိုယာဉ်မောင်းစနစ်တပ်ဆင်ခဲ့ကြကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
တပ်ဆင်ပါလျှင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်အစီအစဉ်များတွင်သို့မဟုတ်မပြုနိုင်မပါဝင် Kies ကိုသုံးပါကသင်သည်အလိုအလျှောက်တပ်ဆင်ခနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီယာဉ်မောင်းအထုပ်ကိုသုံးနိုင်သည် - SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phoneslink ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက် loaded ဖြစ်ကြောင်း Programs ကို:
Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်များအတွက်ယာဉ်မောင်း Download
လျှောက်လွှာများပြီးစီးသည်အထိစောင့်ပါနှင့် PC ကို restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါပါ GT-I8552 အပေါ်အမြစ်အခွင့်ထူးများအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ file system ကို device ကိုမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလွယ်တကူမလိုအပ်သော Pre-installed software ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်အများကြီးပိုကနေ system ကို clean, ရှိသမျှအရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏ backup တစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုအခွင့်အရေးရရှိရေးတို့အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်း - application ကို Kingo Root ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် link ကို-ပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်းပါးတွေကနေ tool ကို Download လုပ်ပါ။
သင်ခန်းစာကို: Kingo Root သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ကြောင့်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုက Samsung GT-i8552 တွင်ပါရှိသောဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအများစုနည်းလမ်းက Android ၏ပြန်လည် install ပြုလုပ်ပါဝင်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပါကအရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏ backup လုပ်ထားဂရုစိုက်သင့်တယ်, ဖကျြဆီးခံရပါလိမ့်မယ်။
အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်အရိုးရှင်းဆုံး tool ကိုစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ကို Samsung များအတွက်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲဖြစ်ပါသည် - Kies အထက်။
Kies ကို run ပြီးကေဘယ်လ်တွေနဲ့ PC မှာဖို့က Samsung GT-i8552 ချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက် device ကိုစောင့်ပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကို Samsung Kies ကဖုန်းကိုမမွငျပါဘူးအဘယ်ကြောင့်
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Backup ကို / Restore" သငျတို့သကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုခငျြဒေတာအမျိုးအစားများမှသက်ဆိုင်ရာ checkbox ကိုတစ်ဦးစစ်ဆေးမှုများထားပါ။ settings ကို defining ပြီးနောက်စာနယ်ဇင်း "Backup ကို".
PC ကွန်ပျူတာ disk ကိုကိရိယာပေါ်တွင်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်မော်ကွန်း၏ပိတ်သိမ်းဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်လင့်ထား။
အတည်ပြုချက်ပေးတဲ့ dialog လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏နိဂုံးမှာပြသပါလိမ့်မည်။
လိုအပ်မှုပေါ်ပေါက်ကိစ္စတွင် Created archive ကိုပြီးတော့သတင်းအချက်အလက်တွေ recover အသုံးပြုသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖို့အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်စမတ်ဖုန်းမှာထပ်သည်ထင်ရှား "ဒေတာ Restore" tab ကို "Backup ကို / Restore" Kies ၌တည်၏။
က Samsung GT-i8552 မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မတိုင်မီအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းအပြင်ဖုန်း software များအတွက်ကြားဝင်စနစ်ကတဆင့်အချက်အလက်များ၏အရှုံးဆန့်ကျင် reinsurance သက်ဆိုင်သောအခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့အကြံပြုသည် - backup လုပ်ထား partition ကို « EFS နဲ»။ ဤသည်မှတ်ဉာဏ်အတွက် IMEI အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်သိမ်းဆည်းပေးသည်။ အချို့သောအသုံးပြုသူများပြန်လည် install ပြုလုပ်အန်းဒရွိုက်စဉ်အတွင်း partitions ကိုယိုယွင်းစေ, ဒါကြောင့်, စစ်ဆင်ရေးများအတွက်, ထိုမှတပါး, အလွန်အမင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်စေနီးပါးကိုအလွန်ဤပြဿနာများ၏အဖြေနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောအသုံးပြုသူ၏လုပ်ရပ်များအလိုအလျောက်ကြောင်းအထူး script ကို partition ကိုအရေးပေါ်သိမ်းထားကြပြီ။
backup လုပ်အပိုင်း EFS နဲ Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ဖို့ script ကို Upload လုပ်ပါ
အမြစ် directory ထဲတွင်တည်ရှိသော directory ကိုမှအပေါ်က link ကိုအပေါ် archive ကိုဇီပ်အတူ:.
ရှေ့အပိုဒ်၏ရရှိလာတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မှာ directory ကိုဖိုင်တွဲများပါဝင်သည် "Files1"အရာသုံးခုဖိုင်တွေရှိပါတယ်။ ဤဖိုင်များကိုလမ်းပေါ်ကူးယူရမည်ဖြစ်သည်ကို C: WINDOWS
Samsung က GT-i8552 အပေါ်ကိုသက်ဝင် "Debugging ကို USB »။ သင်ဤလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်သွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်: "Settings" ကို - "Developers များအတွက်" - switch သည်နှင့်အတူဖှံ့ဖွိုးတိုးတရွေးချယ်စရာများ၏ပါဝင် - ရွေးချယ်စရာများအနီးရှိအမှတ် setting "Debugging ကို USB".
တစ်ကေဘယ်လ်ကြိုးကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ PC ကိုမှ device ကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်, file ကို run "Backup_EFS.exe"။ Command Prompt ကိုပြတင်းပေါက်၏အသွင်အပြင်ပြီးနောက်, အနုတ် data တွေကိုအပိုင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ရန်ကီးဘုတ်ပေါ်မဆို key ကိုနှိပ် « EFS နဲ».
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပေါ်မှာ command line ကိုကမ္ပည်းကိုပေးမည်: "မဆို key ကိုနှိပ်, ရှေ့ဆက်ရန်".
IMEI နှင့်အတူ Created dapm အပိုင်းအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ် "Efs.img" နှင့် script ကိုဖိုင်နဲ့ directory ထဲတွင်တည်ရှိပြီး,
recovery ကို partition ကို « EFS နဲ» အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်နည်းလမ်းများစတင်ထွက်ယူသွားတတ်၏ "Restore_EFS.exe"။ ညွှန်ကြားချက်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အထက်ပါပစ္စည်းများနှင့်ဆင်တူပြန်လည်နာလန်ထူဘို့ခြေလှမ်းများအရေးပေါ်သိမ်းထား။
ဒါဟာအားလုံးသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအချက်အလက်များ၏ backup တစ်ခုအထက်ပါထက်အခြားအခြားနည်းလမ်းများပြည့်စုံစေနိုင်သည်အောင်ကဆက်ပြောသည်ရပါမည်။ သငျသညျအလေးအနက်ထားကိစ္စကိုချဉ်းကပ်လျှင်, သင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလင့်ခ်မှာဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်များထဲကတစ်ခုရွေးကောက်သဖြင့်, ပစ္စည်းတွင်ပါရှိသောညွှန်ကြားချက် execute နိုင်ပါတယ်။
Read more: မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မတိုင်မီမှာ Android-device ကို backup တခုကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို
လူသိများသည်နှင့်အမျှက Samsung ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုအပိုင်း device ကိုထုတ်လုပ်သူတွေအတွက် firmware ကို download လုပ်ပါရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုအမှန်ပင်, သည်အတိုင်း, မော်ဒယ် GT-i8552 သို့တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောစနစ်က software ကို download လုပ်ပါနှင့်များစွာသောအခြား Android device ကိုထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည် samsung-updates.com, (Odin အစီအစဉ်ကိုတဆင့်) ဒုတိယယန္တရားဟာ android-လမ်းအတွက် install လုပ်စနစ်၏တာဝန်ရှိသူတဦးကဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်လင့်များပါရှိသည်ဘယ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 များအတွက်တရားဝင် firmware ကို Download လုပ်ပါ
အောက်ကဥပမာမှာအသုံးပြုတဲ့ဖိုင်တွေကိုလက်ခံရရှိရန် links ကဒီပစ္စည်းကိုအညီဖော်ပြချက်မှာ Android installation ကိုနည်းလမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
က Android အခြေပြုထုတ်ကုန်၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအမှားအယွင်းများနှင့်ဆုံးရှုံးမှု၏ဖြစ်ပျက်မှုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်ပြဿနာများ၏အဓိကအမြစ်စသည်တို့ကိုစနစ်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲကို "စွန့်ပစ်" ဝေးလံခေါင်သီ applications များ၏အကြွင်းအကျန်များစုဆောင်းခြင်းအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည် ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များစက်ရုံ default settings ကိုမှ device ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်နေကြသည်။ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့မလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များ၏သိသိသာသာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ဉာဏ်ကို Samsung GT-i8552 နဲ့သူတို့ရဲ့မူရင်းစမတ်ဖုန်းအားလုံးကို parameters တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေ, ပထမဦးဆုံးအလှည့်အပြီး, ပြည်နယ်အားလုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုထုတ်လုပ်သူများကသတ်မှတ်ထားသည့်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်၏အသုံးပြုမှုသည်။
သုံးဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်ချွတ်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် rekaveri အတွက် device ကို load: "Volume Up", "အိမ်" နှင့် "ပါဝါ".
လိုအပျသော menu ကိုပစ္စည်းများကိုသည်အထိခလုတ်ကိုကိုင်ထားပါ။
ထိန်းချုပ်မှုခလုတ် function ကိုအသုံးပြုပြီး volume level ကို Select လုပ်ပါ "Wipe Data / factory reset"။ ခေါ်ဆိုမှု, စာနယ်ဇင်း Options ကိုအတည်ပြုနိုင်ရန် "ပါဝါ".
သင်တို့ရှိသမျှသည်အချက်အလက်များ၏ device ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်နောက်လာမည့်မျက်နှာပြင်၏စက်ရုံတွင် settings ကိုမှပြန်လည်လုပ်ချင်ကြောင်းအတည်ပြုရန်, အဲဒီနောက်မှတ်ဉာဏ် partitions ကိုပုံစံချ၏လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးအဘို့အစောင့်ပါ။
အဆိုပါကိုင်တွယ်ပြီးစီးအပေါ်သို့ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် device ကိုပြန်လည်စတင်ရန် "ယခု Reboot system ကို" အဓိကမျက်နှာပြင် Recovery ကိုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်, ဒါမှမဟုတ်လုံးဝပိတ်, ရေရှည်ချကိုင် "ပါဝါ"ပြီးတော့နောက်တဖန်ဖုန်းကိုစတင်ပါ။
အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များ devaysa ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ဉာဏ်တင်ဆောင်လာသောပုံမှန် firmware ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ မှလွဲ. Android ကိုပြန်လည်အားဖြင့်ခြယ်လှယ်မတိုင်မီအကြံပြုသည်။
မျိုးစုံဆော့ဖျဝဲ tools တွေကိုသုံးပြီး Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်း၏ system ကိုဆော့ဖ်ဝဲကို manipulate ရန်။ firmware ကိုတစ်နည်းလမ်းကို၏လျှောက်လွှာမတိုင်မီလုပ်ငန်းစဉ်အသုံးပြုသူအဖြစ်အခြေအနေများ devaysa ဖို့ဆန္ဒရှိရလဒ်များကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။
Method ကို 1: Kies
တရားဝင်, ထုတ်လုပ်သူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကို Kies software ကိုအထက်က Android အခြေပြုပစ္စည်းတွေနဲ့အတူလုပ်ကိုင်ဖို့သုံးစွဲဖို့အဆိုတင်သွင်း။ operating system ကိုပြန်လည်နှင့်ဤဆော့ဖ်ဝဲ application ကို၏အမှု၌သင်၏ဖုန်းကိုယူဘို့လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ပါသည်မဟုတ်, app ကိုသငျသညျဆက်ဆက်အသုံးဝင်သောနှင့်တခါတရံတွင်လိုအပ်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုသောစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်စနစ်ဗားရှင်း update လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
Kies ကို run ထို့နောက်ကို Samsung GT-I8552 ချိတ်ဆက်ပါ။ device ကို model ကိုလျှောက်လွှာ window ၏အထူးလယ်ကွင်းထဲမှာဖော်ပြပါတယ်သည်အထိစောင့်ပါ။
အလိုအလျှောက် Kies ဖန်ဆင်းပြီးသား device ကိုတပ်ဆင်သောတဦးတည်း, ထက် system ကိုဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းအသစ်များအတွက် Samsung ရဲ့ server များပေါ်တွင်ရှေ့မှောက်တွင်စစ်ဆေးပါ။ တစ်ခု update ကို၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလျှင်, အသုံးပြုသူအကြောင်းကြားသည်။
Update လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစတင်ရန်, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Update ကိုဖမ်",
ထိုအခါ "Next ကို" အဆိုပါဗားရှင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်င်တစ်ဦးကိုပြတင်းပေါက်၌
နှင့်နောက်ဆုံးတွင်, "Update ကို" backup တစ်ခုနှင့် Non-အသုံးပြုသူပြတ်တောက်လုပျထုံးလုပျနညျးဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဝင်းဒိုးကိုသတိပေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲထိန်းသိမ်းရေး Kies, မလိုအပ်ပါဘူးနှင့်အသုံးပြုသူအပြန်အလှန်ခွင့်မပြုပါဘူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သာအလုပျထုံးလုပျနညျးမြား၏အညွှန်းကိန်းကိုစောငျ့ရှောကျနိုင်သည်
လိုအပ်သောဖိုင်များကိုအ Samsung ကဆာဗာများမှ Download;
မှတ်ဉာဏ်သို့ data တွေကိုလွှဲပြောင်း။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအထူး mode ကိုထဲသို့ပြန်ဖွင့်စက်ကို precedes နှင့်သတင်းအချက်အလက်မှတ်တမ်းတင် Kies ပြတင်းပေါက်နှင့်စက်ပစ္စည်း၏ screen ပေါ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်းများဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။
အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက် Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 reboot မည်အကြောင်း, Kies စစ်ဆင်ရေး၏အောင်မြင်မှုကိုအတည်ပြုကြောင်းပြတင်းပေါက်ပြပေးလိမ့်မယ်။
စနစ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဗားရှင်း၏ဆက်စပ်မှု Check Kiyoshi window ကိုအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါသည်:
Method ကို 2: Odin
သင်၏ operating system စမတ်ဖုန်း reinstall ပြန်အစောပိုင်းကတည်ဆောက်, အန်းဒရွိုက်မှလှိမ့်လျက်, Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ၏ပွနျလညျထူထောငျအစီအစဉ်ကိုအထူးသဖြင့်အထူးပြု tool ကိုလိုအပ်တယ် - Odin ။ Program ကိုအင်္ဂါရပ်တွေနှင့်အထွေထွေထဲမှာအတူအလုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးအပ် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားပြီးနောက်ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများတွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တယောက်မျက်နှာအနှံ့ကို Samsung ထုတ်ကုန်များ၏ software ကိုစိတျအပိုငျးမြားနှငျ့တမ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလျှင်, အောက်ပါပစ္စည်းကိုဖတ်ရှုရန်သေချာစေပါ:
သင်ခန်းစာကို: Odin အစီအစဉ်ကိုမှတဆင့် Firmware ကို Samsung က Android-device များ
လိုအပ်ခဲ့လျှင် device ကိုထုတ်လုပ်မှုကို Samsung Odin ကတဆင့်တွေချုပ်ဖို့အသုံးပြုခံရဖို့အထုပ်၏အဓိကကြင်နာ - ဒါခေါ် "Single-file ကို" firmware ကို။ အောက်ကဥပမာထဲမှာ installation ပုံစံပါ GT-I8552 archive ကို, အဘို့, သငျသညျကိုအောက်ပါ link ကို download လုပ်ပါနိုင်သည်
Odin ကနေတစ်ဆင့် install ဖို့ Single-firmware ကို Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ကို Download လုပ်ပါ
သီးခြား directory ကိုထဲမှာ archive အထုပ်။
လျှောက်လွှာတဦးတည်းကို run ။
Odin-mode မှာ Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းရွှေ့:
devayse ချွတ်ဟာ့ဒ်ဝဲခလုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သတိပေးထ Call "Volume Down", "အိမ်", "ပါဝါ" တစ်ချိန်တည်းမှာ။
ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးလှည့်ကွက်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုအတည်ပြုရန် "Volume Up"သောမျက်နှာပြင် devaysa အပေါ်လာမည့်ပုံရိပ်ပြပေးလိမ့်မယ်:
တဦးတည်းပါ GT-I8552 မှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူအပြန်အလှန်လိမ့်မည်သည့်မှတဆင့်ဆိပ်ကမ်းဆုံးဖြတ်သည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း, ကွန်ပျူတာ device ကိုချိတ်ဆက်ပါ။
ဖွင့်လှစ်သော Explorer ကို window ထဲတွင် click နှိပ်ပြီးတော့, .tar.md5 * ဆော့ဝဲနှင့်အတူ archive ကို decompress နှင့်တိုးချဲ့မှုနှင့်အတူဖိုင်ကိုရွေးဖို့လမ်းညွှန် "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Options ကို" နှင့်အပိုဒ်အတွက်လယ်ကွင်း မှလွဲ. အားလုံးခြစ်ကွက်များအမှတ်ခြစ်ကိုဖယ်သေချာအောင် "Auto Reboot" နှင့် "အက်ဖ်အချိန် Reset".
အရာအားလုံးဒေတာ transfer စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏တိုးတက်မှုများကိုစောင့်ကြည့် - ပြတင်းပေါက်၏ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်မှာမှာ status bar မှာဖြည့်စွက်။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြီးစီးပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုပြသ "PASS,"နှင့်စမတ်ဖုန်းကိုအလိုအလျှောက်အန်းဒရွိုက်သို့ reboot ပါလိမ့်မယ်။
Service ကို firmware ကို
အထက်ပါဖြေရှင်းချက် Single-set ကိုမဖြစ်, သို့မဟုတ် device ကိုကြောင့်အဆုံးစွန်ရန်အလေးအနက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူ software ကိုစိတျအပိုငျးလိုအပ်သည်တစ်ဦးလို့ခေါ်လျှောက်ထားသည်အဘယ်မှာရှိကိစ္စတွင် "Multi-file ကို" သို့မဟုတ် "ဝန်ဆောင်မှု" firmware ကို။ စံပြဖြေရှင်းချက်များအတွက်အောက်ပါလင့်ခ်မှာဒေါင်းလုပ်ဆွဲဘို့မရရှိနိုင်ပါသည်:
Odin ကနေတစ်ဆင့် install လုပ်ဖို့လွှတ်တင်ခြင်း Multifile ဝန်ဆောင်မှု firmware ကို Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552
ခြေလှမ်းများ№1-4တပ်ဆင်ခညွှန်ကြားချက် Single-firmware ကိုလိုက်နာပါ။
တနည်းတစ်ဦးချင်းစီစနစ်က software ကို component တစ်ခုဖိုင်တွေထပ်ထည့်ဖို့အစီအစဉ်တွင်ပါသောခလုတ်နှိပ်,
ကြယ်သီး "BL" - က၎င်း၏နာမ၌ပါရှိသောဖိုင်ကို "bootloader ... ";
"အေပီ" - ခေါင်းစဉ်ထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု "ကုတ် ... ";
ကြယ်သီး "CPS" - ဖိုင် "MODEM ကိုအသုံးပြုပြီး ... ";
"CSC" - သက်ဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းအမည်: "CSC ... ".
အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Options ကို" တပ်ဆင်လျှင်, မှတပါးရွေးချယ်စရာများ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိသမျှသောအမှတ်အသားများကိုဖယ်ရှား "Auto Reboot" နှင့် "အက်ဖ်အချိန် Reset".
partition ကိုပြန်ပြောင်းရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ "Start" အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်,
နှင့်၎င်း၏ပြီးစီးမှုအတွက်စောင့်ဆိုင်း - ထိုကမ္ပည်း "PASS," လက်ဝဲဘက်အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ One နဲ့, အသီးသီးဖြင့် Samsung Galaxy ဝင်း restart ချလိုက်ပါ။
အထက်ပါထိန်းသိမ်းရေးပြီးနောက် loading devaysa အဆိုပါ interface ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ဖို့တော့ကြိုဆိုမျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်အတိုင်းနှင့်ချောအသွင်အပြင်ထက်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ အန်းဒရွိုက်၏ကနဦး setup ကို Perform ။
အဆိုပါပြန်လည် install ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ် / operating system ကိုပွနျလညျထူထောငျပွီးပွညျ့စုံစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ perezrazmetka မှတ်ဉာဏ်အတွက် firmware ကို install မလုပ်ခင်, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-file ကိုထည့်သွင်းခြင်း - အပိုဒ်အခြေအနေကစိုးရိမ်ရသည်နှင့်ဒီခြေလှမ်းဖျော်ဖြေမရှိပဲ, firmware ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးမှသာလြှငျလျှောက်ထား! ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုလိုက်နာပါ, သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-file ကိုထည့်သွင်းဖို့ skip!
ခြေလှမ်း2ပြီးနောက်အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို tab ကို "တွင်း"Re-Initiative ၏အလားအလာအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဆိုချက်ကို-သတိပေးစနစ်ကအတည်ပြုပါ။
စာနယ်ဇင်းများ "သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့" နှင့်ဖိုင်ကိုရွေး « DELOS_0205.pit »
ပြန်လည်စတင်ခြင်းဖိုင်ကိုဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, uncheck "Re-Partition" tab ကို "Options ကို" mark, ကဖယ်ရှားပစ်ကြဘူးပါလိမ့်မယ်။
နှိပ် devaysa မှတ်ဉာဏ်အတွက်အချက်အလက်များ၏အပြောင်းအရွှေ့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက် "Start".
Method ကို 3: ထုံးစံ rekaveri
တပ်ဆင်စနစ်, 4.1 Android ကိုလမျးစခေတ်မမီတော့အပေါ်အခြေခံပြီးသော၏နောက်ဆုံးထုတ်ဝေ၏တရားဝင် version ကို၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်အကြံပြု software ကို GT-I8552 ကိရိယာနှင့်အတူကိုင်တွယ်၏အထက်ပါနည်းလမ်းများ။ တကယ်ထုတ်လုပ်သူများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထက်, ထို program အစီအစဉ်၌သင်တို့၏စမတ်ဖုန်း "အမြင်ကြည်လင်စေရန်" နှင့် OS ကိုပိုသက်ဆိုင်ရာယနေ့ဗားရှင်း get လိုသောသူတို့အဘို့ပြုလုပ်သောဤမော်ဒယ်တစ်ဦးထုံးစံ firmware ကို, ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကို၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သဖြင့် Samsung Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ကို Android5Lollipop running နှင့်ပင်6Marshmallow (အမျိုးမျိုးသောထုံးစံစက်ဘီးကို install ၏နည်းလမ်းတွေတူညီကြသည်) "စေ" နိုငျဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းရေးသားသူသည်နှင့်အညီ, အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကို install လုပ်ဖို့၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပင်အဟောင်းတွေဖြစ်တယ် ဗားရှင်းပေမယ့်တည်ငြိမ်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံ firmware ကို၏ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်တဲ့ - အန်းဒရွိုက် KitKat ကို၏အခြေခံပေါ်မှာ LineageOS 11 RC ။
အထက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူအထုပ် Download အဖြစ်အချို့သောကိစ္စများတွင်လိုအပ်သောဖြစ်နိုငျသော patch ကို, သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 များအတွက် Android ကို KitKat ကို၏အခြေခံပေါ်မှာ LineageOS 11 RC Upload လုပ်ပါ
ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ယန္တရားအတွက်အလွတ်သဘောစနစ်၏မှန်ကန်သော installation ကိုအဆင့်သုံးဆင့်ခွဲခြားထားရမည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆင့်တွေကိုလိုက်နာပြီး, သင်တစ်ဦးအပြုသဘောရလဒ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုမြျှောလငျ့နိုငျ, ထို့နောက်ကြောင်းစုံလင်သောအလုပ်လုပ်နေသည် Galaxy ဝင်းစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆင့် 1: စက်ရုံဖို့ယူနစ်သို့ပြန်သွားသည်
Third-party developer များအပေါ်တစ်ဦးအချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တရားဝင် Android ကိုအစားထိုးဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်, စမတ်ဖုန်းကိုပရိုဂရမ်အစီအစဉ်မှာ "box ကိုထဲက" ၏တစ်ပြည်နယ်မှယူဆောင်ရပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်နည်းလမ်းနှစ်ခုထဲကတစ်ခုကိုသွားနိုင်သည်
ကနေအထက်ညွှန်ကြားချက်အပေါ် Odin ကနေတဆင့်ဖုန်း multifile အရာရှိတဦးက firmware ကို flash "Method ကို 2: Odin" ပိုပြီးထိရောက်နှင့်သင့်လျော်သော, ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုသူဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်ပိုပြီးခက်ခဲ - ဆောင်းပါးထဲမှာအထက်ပါ။
နေအိမ်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်မှတစ်ဆင့်စက်ရုံရန်သင့်စမတ်ဖုန်းကို Reset ။
အဆင့် 2: Installing နှင့် configuration TWRP
Непосредственная установка кастомных программных оболочек в Samsung Galaxy Win GT-I8552 осуществляется с помощью модифицированной среды восстановления. အသင့်တော်ဆုံး OS ကိုအလွတ်သဘော TeamWin Recovery ကို (TWRP) install + rekaveri ဤ romodelov device ကိုအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အပါဆုံး "လတ်ဆတ်တဲ့" အဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ထုံးစံ rekaveri အများအပြားနည်းလမ်းများ Set, ငါတို့နှစ်ဦးသည်လူကြိုက်အများဆုံးစဉ်းစားပါ။
Enhanced rekaveri installation ကို Odin ကတဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပြီးဒီနည်းလမ်းကိုအများဆုံးရိုးရှင်းပြီးပိုကောင်းပါတယ်။
အဆိုပါ PC ကိုနှင့်အတူ install လုပ်ဖို့ TWRP ကနေအထုပ်ကို Download လုပ်ပါ။
Odin အားဖြင့် Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 အတွက် install လုပ်ဖို့ TWRP Download
အဆိုပါ Single-installed firmware ကိုအဖြစ်အတိအကျတူညီထုံးစံ rekaveri Install လုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ စစ်ဆင်ရေးအတွင်းဖြစ်သည့်ကိရိယာတစ်ခုမှာပြေးများနှင့်ချိတ်ဆက် "ဒေါင်းလုပ်" USB မှတ်-port ကိုရန်။
button ကိုအသုံးပြုခြင်း "အေပီ" ထို program file ကို download လုပ်ပါ "Twrp_3.0.3.tar".
စာနယ်ဇင်းများ "Start" နှင့် partition ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအလတ်စားအတွက် data တွေကိုလွှဲပြောင်းဘို့စောင့်ပါ။
ဒုတိယနည်းလမ်းထိုကဲ့သို့သောထိန်းသိမ်းရေးများအတွက်ကို PC မပါဘဲလုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့သောသူတို့အားအသုံးပြုသူများအတွက်တိုးချဲ့ rekaveri ၏ installation ဖြစ်ပါတယ်။
TWRP image ကိုအောက်က link ကိုကနေ Download လုပ်ပါနှင့် Samsung ၏ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 အတွက် install လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏အမြစ်ထဲမှာထားပါ။
PC ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 အတွက် install လုပ်ဖို့ TWRP Download
Google ထံမှစျေးကွက်က Android app ကို Rashr install Play ။
Rashr ကို Google Play စစျေးကွက်များမှ application ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်
လျှောက်လွှာကို run ခြင်းနှင့် Rashr အမြစ်အခွင့်ထူးကိုပေး။
အဓိက tool ကိုမျက်နှာပြင်တွင်နေရာချထားခြင်းနှင့်ကို select "ဟုအဆိုပါ catalog ကနေ Rekaveri", ထိုအခါဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုသတ်မှတ် "Twrp_3.0.3.img" နှင့် button ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးအတည်ပြု "Yes" ပြတင်းပေါက်တောင်းဆိုမှုကို၌တည်၏။
အဆိုပါခြယ်လှယ်မှုအတည်ပြုချက်နှင့်အဆိုပြုလွှာ၏ပြီးစီးပေါ်မှာအတွက်လျှောက်လွှာကနေတိုက်ရိုက်ပြန်ဖွင့်, ချက်ချင်းပြုပြင်ထားသော rekaveri သုံးပြီးစတင် Rashr ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကို set up နဲ့ TWRP
တစ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူပတ်ဝန်းကျင်သို့ booting စက်ရုံ rekaveri သည်အတူတူပင်ဟာ့ဒ်ဝဲ key combination ကိုသုံးပြီးဖျော်ဖြေနေသည် - "Volume Up" + "အိမ်" + "ဖွင့်ပေးခြင်း"ဒါကတင်မျက်နှာပြင် TWRP သည်အထိယူနစ်ပေါ်ချွတ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။
အခါအဓိကမျက်နှာပြင်ပတ်ဝန်းကျင်, ရုရှားဘာသာစကား interface နဲ့ဆလိုက် switch ကို select လုပ်ပါ "အပြောင်းအလဲ Allow" လက်ဝဲ။
အဆင့်မြင့်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အဆင်သင့် rekaveri ။ အဆိုပြုထားပြုပြင်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါအောက်ပါစဉ်းစားပါ:
အရေးကြီး! option ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် Samsung ရဲ့ Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 အပေါ်အသုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ TWRP "သန့်ရှင်းရေး"။ 2014 ခုနှစ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ကာလအတွင်းဖြန့်ချိခဲ့စက်တွေအပေါ်ပုံစံ partitions ကိုတင်ဆောင်လာသော, အန်းဒရွိုက်သို့ boot မှနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမှု, ဤကိစ္စတွင်အတွက် Odin အားဖြင့်ပရိုဂရမ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လိုအပ်မည်!
အဆင့် 3: LineageOS 11 RC Installing
စမတ်ဖုန်းတွင်အဆင့်မြင့် rekaveri တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, ထုံးစံ firmware ကိုအပေါ် system ကိုဆော့ဖ်ဝဲကို devaysa အစားထိုးရန်အတွက်လမ်းသာလှမ်းလိမ့်မည် - TWRP မှတဆင့်ဇစ်-အထုပ်ကို install ။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: TWRP မှတဆင့်က Android-powered စက်ကို flash လုပ်နည်း
လမ်းဖော်ပြချက်ဟာ firmware ကိုဖိုင်တွေရဲ့အစမှာ link ကိုတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားပါ "Lineage_11_RC_i8552.zip" နှင့် "Patch.zip" MicroSD card ကိုစမတ်ဖုန်းများ၏အမြစ်။
TWRP သို့ boot နဲ့အချက်နှင့်အတူမှတ်ဉာဏ် partitions ကိုတစ် backup လုပ်ထားပါစေ "အရန်ကူးယူခြင်းရဲ-e",.
လုပ်ငန်းလည်ပတ်တဲ့ item ကိုသွားပါ "တပ်ဆင်"။ ဆော့ဖ်ဝဲ packages များမှလမ်းကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ပါ။
လြှော "flash ပွတ်ဆွဲပါ" လက်ျာဘက်နှင့် installation ကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးပြည့်စုံသည်။
ယင်းကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းကို restart လုပ်ပါ "ဟုအဆိုပါ OS ကိုသို့ Reboot".
ပို။ ဘာသာစကားရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူမျက်နှာပြင်ကိုငံ့လင့် touchscreen ကစမ်းသပ်။ မျက်နှာပြင်ကိုထိတုံ့ပြန်မပါဘူးဆိုရင်, device ကိုကို turn off, အ TWRP run နှင့် hotfix ဖော်ပြထားပြဿနာကို install - တစ်အထုပ် "Patch.zip"မီနူးကို item မှတဆင့် - installed LineageOS အဖြစ်အတိအကျတူညီလမ်းအတွက် "တပ်ဆင်".
စိတ်တိုင်းကျခွံ၏ set ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ပြီးနောက်ကနဦး setup ကို LineageOS လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အန်းဒရွိုက် KitKat ကို updated အခြေခံအသုံးပြုသူပြုပြင်ထားသော parameters များကိုအဆုံးအဖြတ်ပြီးနောက်
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, လက်ျာဘက်ပြည်နယ်အတွင်းရှိစမတ်ဖုန်းကို Samsung က Galaxy ဝင်းပါ GT-I8552 ၏ system ကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုဆောင်ခဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ broaching စဉ်အတွင်းအသိပညာနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏တစ်ဦးအခြို့သောအဆင့်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်က Android ကိုထည့်သွင်းရန်ညွှန်ကြားချက်မှသက်သေပြ software ကို tools များနှင့်ခံမှုရှိတဲ့လိုက်နာမှု၏အသုံးပြုမှုကိုပါ!
ဗီဒီယို Watch: How to extract file NEW method (နိုဝင်ဘာလ 2019).